လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု - ကျူးလွန်သူ, ရောဂါလက္ခဏာတွေအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် Way ကို Forward
သူတို့အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အားလုံးမိဘများသူတို့ကလေးတွေကိုချင်တယ်။ သို့သော်သောအခါကြှနျုပျတို့ကလေးတွေနဲ့အတူမှာအားလုံးဤကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်နိုင်သလဲ ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်မိမိအကလေးကသတိပေးလိုက်သည်ကိုအတိအကျအဘယ်အရာနှင့်အများဆုံး? ကအားလုံးကိုအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကနေကလေးကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အနည်းငယ်မြေပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတင်ပြရန်လိုအပ်သနည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုမကြာခဏမိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အမြင်တွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိစ္စ ပို. ပင်ခက်ခဲသည်နှင့်အမျှအများကြီးအလိမ္မာနှင့်အတူချဉ်းကပ်ရပါမည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမဆိုပြဿနာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိဘများထံသို့လာရန်ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့နှင့်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်သောကလေးအားသိရှိစေရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု - ကာကွယ်မှုခိုင်မာတဲ့ Self-ယုံကြည်မှုမှတဆင့်
ယုံကြည်မှုကလေးတွေမရှိသလောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြသည်။ သူသည်ကလေးကအိမ်မှာချိုးဖောက်မှုများခုခံတွန်းလှန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောအားကမ်းလှမ်းကြောင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်တံခါးခုံကိုပိုမိုမြင့်မားပုံရသည်။ ဒါကြောင့်မိမိအကလေးကတတ်နိုင်သလောက်တစ်ဦးအပြုသဘော Self-image ကိုပေးနှင့်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အာရုံစိုက်သူတို့ကိုလေးစားရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ဦးလေး၏နမ်းခြင်းနှင့်စတင်သည်သူငယ်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကလေးမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းထိထိမိမိသို့မဟုတ်ချစ်ခင်အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။
တစ်ဦးက "ဒါဟာမဟုတ်ရင်ဘထွေးမှားသည်အတူတကွကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆွဲ, ထိုမဆိုးရဲ့" အမျိုးအနွယ်ကိုအနာဂတျမှာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ germinates ဘယ်မှာအိပ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သူကမလိုချင်ကြဘူးကြောင်းဤကဲ့သို့သောစကားနှင့်အတူအမှုအရာလုပ်ဖို့ကလေးတစ်ဦးကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပဲ။ ကလေးတစ်ဦးလိုသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးအဘယျသူကသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာသင်အဒေါ်များကထိမိခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူးဆိုသတ္တိရှိဖို့လိုသည်။ ဒီအဘို့, အမြိုးသားအ Self-ယုံကြည်မှုနှင့် Self-စိတ်ပိုင်းဖြတ်သူတို့၏အလောင်းများကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်မှခံစားချက်လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကိုသင်အထူးသင်တန်းများ၌မိမိယုံကြည်စိတ်ချမှုအားကောင်းလာစေရန်နိုငျသညျ, အစားရှက်နှင့်ယူထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နီးပါးသည်ခပ်သိမ်းသောမြို့တို့၌ယနေ့မရရှိနိုင်, သူငယ်တန်းကလေးများအတွက်ပင် Self-ကာကွယ်ရေးအချို့သောအဖွဲ့အစည်းများဆက်ကပ်။ နှင့်သားကောင်အခန်းကဏ္ဍထဲကထိုသို့ဆောင်တတ်၏ - ဤတစ်သူငယ်တန်းကလေးကခုခံကာကွယ်ဖို့ထိထိရောက်ရောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်နိုင်ကြောင်း, ကဆိုသညျကား, ဒါပေမယ့်ကလေးတစ်ဦးထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းအတွက်ရရှိသည်သောအသိပညာပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်ရဲရင့်စေသည်မှမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ကလေးသင်တို့ဆီသို့အပ်နှင်းကြောင်းဒါကြောင့်နှောင့်ရှက်သို့ပြေးအမှု၌သင့်ကလေးနှင့်အတူတစ်ဦးကဆကျဆံရေးကောငျးသည်, alpha နဲ့အိုမီဂါဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်, သငျသညျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, အရှက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲအမှန်တကယ်လိင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင့်ကလေးအကြောင်းကြားနှင့်သင့်ပါတယ်။ ငှက်နှင့်ပျား၏ဇာတ်လမ်းရှည်လျားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသာသိတယ်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့တတ်နိုင်သမျှပွင့်လင်းဖြစ်အားလုံးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပေး, အစစ်အမှန်အမည်နှင့်ရိုးရိုးသားသားသင့်ကလေး၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုဖို့မမကြောက်ပါဘူး။
သင့်ကလေးကမေးတယ်ဆိုပါက - နှင့်ကလေးများအားလုံးကိုလူတယောက်အသက်ပြီးနောက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိစဉ်ကတည်းကသူကမေးပါလိမ့်မယ်! - ကလေးဘယ်ကလာ, ထို့နောက်သင်တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူမှာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုပြောပြခြင်းနှင့်ပြင်ပရှိတောငန်းကြကုန်အံ့။ မိဘများပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလိင်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီအံ့သြဖွယ်ပညာရေးစာအုပ်တွေနဲ့ဘရိုရှာယခုအခါရှိပါတယ်။
မူလတန်းကျောင်းအသက်ကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသိသင့်ပါတယ်။ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအဖန်ဖန်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှသင့်ကလေးကိုရှင်းပြပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သတိပေးခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်အကြားဒဏ်ငွေလိုင်းလည်းမရှိ။
ဒါဟာတည်ရှိပေမယ့်ခဲဖြစ်ပျက်: ဒါကြောင့်သင်တို့သည်လည်းသင့်ကလေးပြောပြရန်အရေးကြီးသည်။ ကဖြစ်ပျက်သောအခါမူကား, သင်ကအကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတိတ်ဆိတ်ဖို့သူငယ်ကိုအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူခြိမ်းခြောက်မှုများကိုထုတ်ပြန်သို့မဟုတ်ကလေးငွေညှစ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနှင့်သူ၏ငြိမ်ဝပ်စွာနေဘို့သူငယ်ကိုဆုချပေးသည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ကလေးကိုသိသင့်ပါတယ်။ နည်းလမ်းများနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မည်သူမဆိုတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစတင်သောအခါအကိုလည်းပိုမိုလွယ်ကူအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်မိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ပါ။
မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအခြားမှတစ်စက္ကန့်ကနေ Insidious နှင့်မကစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုကပြစ်မှုကျူးလွန်သူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုပိုပြီးနယ်စပ်ဖြတ်သန်း, ရှေ့ဆက်သူ၏လမ်းခံစားရပါတယ်။ ကခြိမ်းခြောက်ရင်တောင်ချက်ချင်းသူ့ကိုမှလွဲကြောင်းဘာမှအကြောင်းပြောဆိုရန်ဒါသင့်ကလေးကိုအားပေးပါ။ ဒါဟာအကြောင်းပြောနေတာပါကသာကာကွယ်ပေးနိုင်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခု: အကြွင်းမဲ့အာဏာအမည်ဝှက်နှင့်မျှမမျက်မြင်သက်သေများ: အင်တာနက်ကိုသူအစစ်အမှန်ဘဝမပွုနိုငျသောအရာကိုလက်ပေါ်မှာတစ်ခုခုရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်အမည်မသိဆက်လက်ကိုယ်တိုင်ကမှထွက်ရှိသောသင့်လျော်သည်။ ထို့ကြောင့်တိကျစွာအသစ်မြင်ကွင်းတစ်ခုအလွန်ရေပန်းစားသည်။
ကံမကောင်းစွာကဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ဒီကမ္ဘာသစ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာမသိသောအမြိုးသားသားကောင်များဖြစ်ကြသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ကလည်းကွန်ယက်၏ကမ္ဘာပေါ်မှာလုံခြုံစိတ်ချစွာရွှေ့ဖို့အငယ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအရာအားဖြင့်အနည်းငယ်မြေပြင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်အလွန်လွယ်ကူစွာအင်တာနက်အပေါ်ပုံများ, အီးမေးလ်လိပ်စာများ, ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်၎င်းတို့၏သားကောင်များပင်လိပ်စာများဖြစ်ကြသည်။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုမကြာခဏလူသိရှင်ကြားလူသိများက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ဤအကြောင်း post ကြောင့်ထိုသူတို့အဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာထို့ကြောင့်တစ်ဦးလေပြေနှင့်အသိပညာအပြစ်ပေးမဟုတ်ပါဘူး။ အများစုမှာကျူးလွန်သူသူတို့ဖြစ်ကြသည်ထက်သူတို့ကိုယ်သူတို့မကြာခဏအငယ်စေနှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားဟန်ဆောင်ဖို့သူတို့ရဲ့သားကောင်နှင့်အတူတစ်ချိန်ချိန်အဆက်အသွယ်မှာဤအချက်အလက်ယူပါ။ တခါတလေလည်းပထမဦးဆုံးထိတွေ့ဖြစ်ပေါ်, အခန်းပေါင်းသို့မဟုတ်အများပြည်သူဖိုရမ်များရှိ chat နေကြသည်။ ဤအဖိုရမ်များမှာတော့လူငယ်များဘုံဝါသနာအပေါ်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပိုပြီးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်ကြောင်းကိုဒါ, (လူငယ်များထို့နောက် rated ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များ, ထသတ်မှတ်နိုင်သည်ဘယ်မှာဥပမာတွင်ကျယ်စွာ, များအတွက်) ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူစုဝေးကြသည်။ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုမကြာခဏကြောင်း, တစ်ဦးအတုပရိုဖိုင်းကိုသုံးထားပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘဲအဖြစ်မှန်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာ (မွေးသက္ကရာဇ်, နေထိုင်ရာအရပ်ဌာန, ပညာရေး) ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
အဆိုပါပြဿနာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွေမှာ protected ကြောင်းခံစားမှု, များစွာသောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ယက်အတွက်ကမ္ဘာကြီးကို virtual ဖြစ်တယ်, ဒါအန္တရာယ်အဖြစ်မှန်သို့၎င်းတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေကို virtual သာမဟုတျဘဲဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့မှတ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစတင်လိမ့်မည်နည်း ဒါဟာအမြဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစကားပြောပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုမှမလာပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ရင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအချို့သောကျူးလွန်သူသားကောင်များပုံရိပ်တွေ Send - ကကလေးအတွက်တတ်နိုင်သမျှကြောင့်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုသူ့ဟာသူသောအငယ်နုသေး, ကမငြိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပေးသောမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုဖိတ်ကြားချက်ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ပေးပို့, လိင်ပြစ်မှုလှုံ့ဆော်နေကြသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံ surfing အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်း - ကလေးများများအတွက်သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါထိပ်တန်းဦးစားပေး anonymity ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင့်ရဲ့လိပ်စာသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းနံပါတ်မ Publish ။ ထုတ်လွှင့်ဘယ်တော့မှတစ်လူစိမ်းသင့်ရဲ့ဒေတာကိုတစ်ယောက်တည်းမဆိုအကောင့်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်မိသားစုဓာတ်ပုံများကြကုန်အံ့။ သင်တစ်ဦးအမည်ပြောင်ကိုသုံးပါလျှင်, သူကထိုကဲ့သို့သော Lisa99 အဖြစ်သင့်အမည်ရင်းသို့မဟုတ်သင့်အသက်အရွယ် divulge ဆံ့မခံသင့်ပါတယ်။ ဒီကနေ, ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Lisa ကိုယခုနှစ် XXXX မွေးဖွားခဲ့သည်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျနံပါတ်များနှင့်အမည်များကိုသုံးပါ။ သင်တို့သည်နောက်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံသတ်မှတ်ထားလျှင် Facebook ကဲ့သို့က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သင်သည်ပိုပေါ်ကျလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလှုံ့ဆော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုမဟုတ်ကြောင်းဤနေရာတွင်ထုတ်ကြည့်ပါ။
ကို virtual အာကာသမှ reality ။ အဆိုပါကွန်ယက်ကိုတစ်ဦးအာကာသ, border မပါဘဲနှင့်န့်အသတ်ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့အာကာသဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်အပေါင်းတို့, အမြိုးမြိုး: အသေးရာဇဝတ်ကောင် ပတ်သက်. ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေထံမှဘဏ်ဓားပြနှင့်ကလေးဗလက္မှတဆင့်။ မကြာခဏဆိုသလိုပဲအဆိုးဆုံးရာဇဝတ်ကောင်အများဆုံးအပြစ်မဲ့ကြည့်တွေနဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်။ မရကယ့်ကိုနောက်ကွယ်မှမည်သည့်မျိုးမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကစားနည်းနည်းထူးဆန်းပုံရသည်ဆိုပါကအကြောင်းသင်၏မိဘများပြောဆိုပါ။ သင်မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံမနေပါနဲ့။ ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများနှင့်ဖုန်းနံပါတ်အဖြစ်ဆန်ရက်စွဲများတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်အတွင်းပိုင်ကြပါဘူး။
က virtual profile များကိုနောက်ကွယ်မှအစစ်အမှန်လူတွေကိုဖုံးကွယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမိစေပါ။ လူတိုင်းမမိတ်ဆွေတစ်ဦးသည် - သူကပြောပါတယ်များအတွက် MickeyMouse17 အကောင်းဆုံးအသံနှင့်တကယ်ကိုချိုမြိန်ကောင်လေးသည်ဖြစ်စေ, မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေဆဲပင်။
အင်တာနက်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအစည်းအဝေးကို။ သငျသညျကိုအင်တာနက်ကနေမှသာသိကြတော်မူသောတစ်ဦးအသိအကျွမ်းအတူတက်ဖြည့်ဆည်းဘူး။ ဤတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအန္တရာယ်များများထဲမှပုန်းကွယ်။ ဒီလိုမျိုး၏ဖိတ်စာတုံ့ပြန်ဘူး! ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့ကိုသင်ဖို့ရယ်စရာလာ, သင်ဖိုရမ်အစီရင်ခံစာ၏စီမံခန့်ခွဲသူမှချက်ချင်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်သငျ့သညျ။ ဗီဒီယိုများ, ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောလက္ခဏာများနှင့်အတူစာသားကိုဖြစ်စေ, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝသင်အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတူညီတဲ့အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုက်၏အော်ပရေတာရဲမှချက်ချင်းပြောင်းနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာမှားယွင်းနေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်မဆိုပုံစံမှကြွလာသောအခါကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှသာစတင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သူများသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာအတိအကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဖမ်းယူ? ရှင်းနေသည်မှာတဦးတည်းရှင်းလင်းစွာဒီနယ်နိမိတ်ဆွဲလို့မရပါဘူး။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ထိုသူငယ်၏အလိုတော်ထိခိုက်စေသောသို့သော်အရာအားလုံးတစ်ရာဇဝတ်လုပ်ရပ်။
ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်, ဒီပင်တစ်မူထူးခြားသောကြည့်ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းသောမှတ်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတလက်ပေါ်မှာအလွန်အပြုသဘောဆောင်သောဤပြဿနာအပေါ်übersensibilisiertနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာ setting တွင်အလုပ်လုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဆူညံစေသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးဘိုးဘေးတို့သညျမိမိတို့သားသမီးမှားသွားကြဖို့ ပို. ပို. ဘယျလိုမှမဆက်ဆံရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ပထမအဆင့်နှောင့်ယှက်သည်။ ချက်တင်ခန်းသို့မဟုတ်ဖိုရမ်များမှာတော့ကလေးများသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံကိုစလှေတျနေကြသည်။ တခါတရံမှာသူတို့ကလည်းအများအားဖြင့် Skype ကိုကနေတဆင့်, နှုန်း se လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်, ဒီတော့အဲဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နှောင့်ယှက်၏အခြားပုံစံများကိုလမ်းပေါ်မှာဖို့တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးများကိုနဲ့ content ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာရေးကျွောငွာဖြစ်ကြသည်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းကလေးသူငယ်အခထိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြစ်မှုကျူးလွန်သူကသူ့ဟာသူကိုထိသို့မဟုတ်ပါကမိမိကိုယျကိုမထိနဲ့သူ့ကိုစောင့်စေခြင်းငှါကာတွန်းကား, အဆီးခုံမို့မို့ဧရိယာထဲတွင်သူငယ်ခြင်းဖြင့်ထိမိခံရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ထိမုဒိမ်းကျင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များပါဝင်သည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကလေးညစ်ညမ်းလည်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏ဧရိယာထဲမှာပါရှိပါတယ်။ ဤတွင်ထိုသူငယ်သုတ်သင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေသည်နှင့်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခံရဖို့။ တခါတရံလည်းညစ်ညမ်းပုံနဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တခြားအလေ့အကျင့်ကိုကြည့်ခိုင်းသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏ပုံစံများကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနေကြလို့ပဲစိတ်ကူးယဉ်သကဲ့သို့မတူကွဲပြားများမှာ!
အဘယ်ကြောင့် Display ကအဲဒီမှာဒီတော့ရှားပါးပါသလဲ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု unreported ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တိုးမြင့်မားသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုမကြာခဏသူငယ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကနေလာဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေရလဒ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်ထိုသူငယ်ကိုကျော်အာဏာကိုသူတို့၏အနေအထားကိုအလွဲသုံးစားတဲ့သူမိသားစုဝင်များ, ကံမကောင်းရှိပါတယ်။ ကလေးသူငယ်အခစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, တစ်ဦးအပေါ်မှီခိုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး, အချိန်ကြာမြင့်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်လို့မရဘူး။ ဒါကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုရဲနဲ့တိုင်ကြားချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမထားဘူးသောမိသားစုတစ်စု၏အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်ဆုံးဖြတ်သည်ရင်တောင်။ အမှန်မှာအဆိုပါပိုမိုနီးကပ်စွာကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကပြစ်မှုပြသကြောင်းနှင့်တရားရုံးမီလာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မိန်းကလေးငယ်များနေဆဲအများစုပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရပ်၏သားကောင်များဖြစ်ကြကြောင်းအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအထီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူမကြာခဏချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်အသိအကျွမ်းများ၏ချက်ချင်းစက်ဝိုင်းမှလာကြ၏။
သားကောင်များကိုမကြာခဏအချိန်ကြာမြင့်စွာတိတ်ဆိတ်စွာနေကတည်းကကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု detect လုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာသိပ်နောက်ကျသည်နှင့်ပြီးသားစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သည်အခါကမကြာခဏရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရိပ်လက္ခဏာအတော်များများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ညွှန်ပြသေချာပေါက်မလိုပေ။
အထူးသဖြင့်ဤပြဿနာအပေါ်များစွာသောကွာရှက်, အစဉ်အဆက်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တန်းများထဲမှတစ်ဦးသံသယလွှင့်မကြာခဏမတရားစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိပါတယ်စွပ်စွဲချက်များကိုနဲ့တစ်သက်တာစွပ်စွဲခံရသူများနှင့်မကြာခဏကယ့်ကိုနောက်တဖန်ပြန်လည်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သာနှစ်ပေါင်းသားကောင်များခံစားနေရပြီး, ထိုအလွဲသုံးစားမှုသတိမမူဖြစ်ပါတယ်ထက်ပိုပြီးသံသယမဟုတ်ဘဲတစ်ကြိမ်ဖော်ပြသားကောင်များ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်ပါသည်။
အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အမူအကျင့်ပြဿနာများတစ်ခုနောက်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကြောင်းမဆိုလိုခဲ့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအမျှကောင်းစွာဒုက္ခ, ကျောင်း entry ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ချစ်ရသူရဲ့အရှုံးအမူအကျင့်၌ဤပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်အချို့သင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးခြေလှမ်းများကိုမကြာခဏယာယီအပြုအမူပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။
အနီးကပ်လေ့လာမကြာခဏသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဇာတ်ကောင်, အသက်, ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီကလေးသည်အလွဲသုံးစားမှုကိုင်တွယ်မေ့လျော့မထားရပါ။ အရေးကြီး: သံသယ, ပိုမိုမူမမှန်တက်ပြပိုမိုခိုင်မာစေ!
အချက်ပြမှုများ၏အရေအတွက်ကိုဆူညံအထူးသဖြင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်သင့်မိဘများဖြစ်ကြသည်။ အိပ်စက်ခြင်းပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အိပ်မက်ဆိုးများတိုးမြှင့်ဖြစ်ပျက်မှု, အချိန်ကြာမြင့်စွာ Saubersein ပြီးနောက် bedwetting သို့မဟုတ်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများ, ယေဘုယျ, whiny အပြုအမူအသစ်စိုးရိမ်မှုတွေသို့မဟုတ် phobias သူငယ်အမှန်တကယ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြောင်းကလေးဆန်သောအပြုအမူမှဆုတ်ယုတ် (ဥပမာလက်မနို့စို့, ကလေးဟောပြောပွဲ): ဤရွေ့ကား, အထူးသဖြင့်မွေးကင်းစအတွက်ပါဝင်သည် လုံခြုံရေး, အစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်မတရားသောဆုံးရှုံးမှု, အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း, လူမှုရေးဆက်ဆံရေးကိုကြောက်ရွံ့လိုအပ်ချက်တိုးလာ, ကိုယ်ပိုင်တဲ့ဤလောကသို့ဆုတ်ခွာ, အထူး form မှာတည်ရှိပြီးအခြားကလေးများနှင့်လူကြီးများ၏အလောင်းများကိုအတွက်ထူးခြားတဲ့အတိုးလည်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမကြာခဏဂိမ်းသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်အတွက်ချိန်ညှိနေကြသည်ဂိမ်းထဲမှာပြသ အကျိုးစီးပွားများနှင့်လှပသောအရာဂိမ်း), အရှုံး။
အဟောင်းကလေးတွေအတွက်မကြာခဏအခြားအမူမမှန်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေရာဇဝတ်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေအတှေး, ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လျော့နည်းစေရန်ရောဂါအစာစားခြင်းအပေါ်အထိနိုငျသော, ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်ပါပြီ။ မကြာခဏကဤလူငယ်များကိုလည်းသိသိသာသာဆိုးရွားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြသ။
အဆိုပါအပြုအမူအတွက်အထက်ဖော်ပြပါအပြောင်းအလဲများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေတစ်ဦးတည်းပေမယ့်မကြာခဏအများအားဖြင့်လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလုံလောက်သောအရိပ်အယောင်မပေးပါဘူး။ သူတို့ဟာမကြာခဏသာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်. သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ (စအို fistula ဖြင့်ဖြစ်စေ) ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု, အစာအိမ်နာကျင်ခြင်းကွိတျ, (ဆီးအိမ်ရောဂါကူးစက်မှုများအတွက်) ဆီးထဲမှာသွေးသို့မဟုတ်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကိုသဘာဝနေကြလို့ပဲနှင့်ပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပေမယ့်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလက္ခဏာများမှာပေမည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဖို့လိင်အင်္ဂါဧရိယာထဲမှာနာကျင်မှု, မကြာခဏယားယံခြင်း, ဝမ်းဗိုက်ဒဏ်ရာ, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများပါဝင်သည်။
အဆိုပါစျေးမှာမကြာခဏမောခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေပါသည်! ယခုအဘယ်သို့နည်း, ငါသည်ငါ့ကလေးကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအပြစ်ပေးဖို့လာမယ့်အဘယ်သို့ပြုပါသနည်း ကလေးသူငယ်အခအလွန်အမင်းခေါင်းစဉ်အောက်ဆိုပါကအများဆုံး encrypt လုပ်ထားသို့မဟုတ်သာဖြစ်စေအပိုင်းအစများအတွက်လုပ်ပေးသည်။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုညွှန်ပြခြင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောခဲ့လက္ခဏာတွေအတော်များများရှိပါတယ်။
ဒါဟာတစ်အလွဲသုံးစားလုပ်ညွှန်ပြလျှင်သင်ပြင်းထန်စွာသူငယ်ကိုယူကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အလွန်နည်းပါးကိစ္စများတွင်ကလေးငယ်များထိုသို့သောအမှုကိုအထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့က, အလေးအနက်ထားဆိုအကြံပြုချက်ယူနိုင်အောင်သေးငယ်တဲ့ပြုလုပ်စေခြင်းငှါစာဝှက်ပေးတယ်။
ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြောင့်ကလေးများမကြာခဏပင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မိသားစုထံမှအများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဖော်ပြကြဘူးကြောင်း, ပိုဆိုးတာကစကားပြောခန်း! ဤသည်ကိုမကြာခဏလေးတွေများအတွက်အကြီးမားဆုံးတံခါးခုံဖြစ်နိုငျပါသညျ!
ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်ကိုပင်လျှင်, အေးဆေးတည်ငြိမ်နေပါ။ ကလေးသူငယ်အခကအာဏာမဲ့ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်မကြာခဏအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရရှိရာအခြေအနေကို၌တည်ရှိ၏။ အတော်လေးမကြာခဏကအပြစ်တင်ဖို့သူငယ်ကိုဖျောင်းဖျသူပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရနှင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်, သင့်ကလေးနှစျသိမျ့ကကိုခိုင်ခံ့စေကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စုဆောင်း, ဒါပေမယ့်သာစိတ်ပညာရှင်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသင့်လျော်စွာမဆိုအလွဲသုံးစားမှုအရွက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုဆက်ဆံဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစ, မိဘသူမ၏သူငယ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူပိုကောင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်ခက်ခဲအခြေအနေများကိုထောက်ပြနိုင်ပြီးဘယ်လောက်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။
မိဘတစ်ဦးအဖြစ်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှတစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးနေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အားဖြင့်ကလေးအတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကြောင်းစိတ်ပျက်ဖွယ်နှင့်နေရာထဲကဖြစ်ဟန်ရင်တောင်: အလေ့အထကိုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်စိတ်ထိခိုက်အတွေ့အကြုံများကို process မှထိုသူငယ်ကူညီပေးသည်။
တခါတရံသူကမကြာမီခိုင်မာစေသောတစ်ခု sneaking သံသယနှင့်အတူစတင်သည်။ ကလေးသူငယ်အခပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဖို့မပါဘူးဆိုရင်, တဦးတည်းမဟုတ်ရင်သူကကလေးသူငယ်အခလုံးဝပိတ်သောဖြစ်နိုင်သည်တိုက်ရိုက်မေးခွန်းများကိုအတူကတရမပေးသင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်, ငါ့ကိုမိမိနေ့နဲ့ပတျသကျတဲ့ကလေးကပြောပြပါရစေ, ထိုသို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အနောက်တိုင်းပြောတတ်ရှိမရှိမှဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ။ တချို့ကဘယ်တော့မှ - တကယ်ဘယ်တော့မှ - ဆောင်ပုဒ်ဖို့သူငယ်ကိုကဲ့ရဲ့: "ရပါမည်သို့သော်သင်သည်အများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောဟုခဲ့ကွောငျး" ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုး: နှင့် "ငါသည်သင်တို့၏အရပျ၌အလိုတခုတည်း" ဟုအဆိုပါပြိုလဲနေသောကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါစေခဲ့ဘူး " ... "
ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်သေးသူငယ်၏အပြစ်ကိုအားပေးကနောက်မှပင်ပိုမိုဆိုးရွားခံစားရ၏။ ဒါဟာကလေးတစ်ဦးမှာအပေါငျးတို့သအလွဲသုံးစားမှုဖြေရှင်းရန်ရဲစွမ်းသတ္တိတွေအများကြီးကုန်ကျသည်။ သငျသညျကနဦးထိတ်လန့်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြလျှင်, သင်အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အကူအညီတောင်း်ထမ်းကိုမေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ဦးအလွဲသုံးစားဒီပြစ်မှုကျူးလွန်သူမတိုင်မီအခြားကလေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်တစ်ခုအလေးအနက်ပြစ်မှုကြောင့်ဤအများအားဖြင့်ရဲတို့ပါဝင်သည်။ မည်သို့နှင့်ရဲကိုဖွင့်သောအခါ, စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအတွက်သူငယ်၏ကောင်းသောအဘို့ပြုရပါမည်။